Ny lisitry ny Semalta dia lisitr'ireo rindrambaiko tsara indrindra amin'ny tranonkala
Ireo mpandika tranonkala fampahalalana manokana avy amin'ny vohikalan'ny mpifaninana iray, toy ny votoatin'ny teny fohy tsara, ny mailaka ID, ny tamba-jotra, ary ny rohy sarobidy. Ity karazana tahirin-kevitra ity dia manome ny mpivarotra sy ny webmasters miaraka amin'ny fahafahana mampitaha ny vidin'ny vokatra isan-karazany, ny fitadiavana ny fikarohana an-tserasera, ny fampidinana ny tranokalany ho an'ny lalao fikarohana tsara kokoa, ary ny fananganana backlinks.
Best Web Scraping Software:
Azo antoka ny filazana fa misy fandaharana maro tsy miankina sy fandinganana, na amin'ny fampiasana manokana sy ara-barotra. Ny fitaovana toy ny Google Web Scrapers, YahooPipes ary Outwit dia efa nampiasaina tao amin'ny aterineto. Ankehitriny, izao no fotoana hanamarinana ny lisitr'ireo tranonkala farany sy mahatsikaiky indrindra ho an'ny mpitrandraka sy ny mpangalatra.
HarvestMan dia mpamaky tranonkala malaza voasoratra ao Python ary ampiasaina handefa rakitra avy amin'ny pejy manokana. Azonao atao ny mamaritra izay tranonkala tianao halaina ary ny farany farany amin'ny HarvestMan dia hanatanteraka ilay asa tianao ao anatin'ny segondra. Fantatra amin'ny fitsipika voalazan'ny mpampiasa azy io ary manana safidy mihoatra ny enim-bolana sy endri-javatra mba hahazoana tombony. Raha ny marina, HarvestMan dia torohevitra tsara sy fandaharam-pampianarana marobe, saingy tsy ho mora ny fametrahana voalohany anao.
Content Grabber no sehatra enti-manamboatra tranokala, mpangalatra ary entractor. Tena mahavariana, matevina ary mafonja izy io, malaza indrindra ho an'ny mpampiasa azy. Ity rindrambaiko ity dia manana ny endri-javatra sy ny toetra rehetra izay tsy ho hitanao amin'ny import..io toy ny fitaovana tsara indrindra. Ny Content Grabber dia afaka mamoaka ny lahatsoratrao sy ny sary anao nefa tsy mampandefitra ny kalitao. Afaka miditra ao amin'ny Google Docs, Dropbox ary Google misy anao izy io raha tsy misy olana. Manana ny fahaiza-manaon'izy ireo handraisana ireo angona avy amin'ny tranonkala rehetra ary hampiova azy amin'ny endriny manokana.
Mozenta dia tena tsara ho an'ny fampiasana ara-barotra, fanombohana, programmers, developers ary mpandraharaha amin'ny tambajotra sosialy. Ity fitaovana tsy manam-paharoa sy mahery vaika ity dia natao ho an'ny fitrandrahana mora sy haingana. Manampy amin'ny famandrihana na fanasoketana tranonkala iray izany ary manana ny teboka & tsindrio ny interface. Ankoatr'izay, ny herin'ny rahona dia afaka manaparitaka, mitahiry, mitantana sy mandamina ny angona tsy misy olana, noho ny fitaovana an-damosin'i Mozenda ho an'ny mpampiasa eran-tany.
Ny fikambanana isan-karazany, manomboka amin'ny fanombohana mankany amin'ny masoivohon'ny governemanta, dia afaka mitahiry ny angona ao anaty endrika azo ampiasaina amin'ny Needle Need. Izy io dia iray amin'ireo mpilalao sy mpitsikilo mafonja indrindra sy mahaliana indrindra ao amin'ny aterineto. Ity rindrambaiko ity dia manampy amin'ny fikarakarana ny lisitry ny angona sy ny tranonkala samihafa. Ny fametrahana fampahalalana mahasoa avy amin'ny Aterineto dia tsy azo atao mihitsy raha tsy misy io programa mahavariana io. Na dia manosihosy na manapotika tranonkala iray aza izy, dia azonao atao ny manisy fiheverana ny fomba nilazan'i Needlebase ny asany sy ny fomba nanorenany ny tranokalanao.
Farany fa tsy ny kely indrindra, ScrapeBox dia fitaovana mahery vaika sy mahasoa ny tranonkala, manodina sy mikiky. Tena ampiasain'ireo manam-pahaizana SEO, webmasters, ary mpivarotra an-tserasera. Ny sasany amin'ireo spamers sy hackers koa dia mampiasa io fandaharana io mba hanangonam-baovao avy amin'ny tranonkala sy bilaogy maro avy hatrany. Izy io dia maka ID ny ID, manamarina ny laharana misy ny pejy, ny sandan'ny rindranasa, ny raki-tserasera, manamarina ny proxy, ary manome fepetra RSS ho an'ny mpamaky anao Source .